राजनीतिक रंग विना हामी ब्यवसायी हुन चाहन्छोै - मिहिका धाख्वा - Sunkesari
January 14, 2020 January 14, 2020 sunkesari News Tourism
नेपाल एशोशीएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्टस नाट्टाको आगामी माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा मिहिका शाह धाख्वा समुह स्वतन्त्र प्यानलबाट परिवर्तनका लागि एकता भन्ने नारा सहित प्रतिपर्धामा उत्रदैछ । अच्युत गुरागाई नेपालीकांग्रेस समर्थक प्यानल र भिमप्रसाद पन्त नेकपा माओवादी समर्थक प्यानलबाट चुनावी मैदानमा उत्रिरहेकाबेला मिहिका समुहले स्वतन्त्र रहेको बताएको छ । मिहिका शाह धाख्वा सन २०१४ देखि २०१६ को नाट्टा कार्यसमितिमा महासचिव पदमा रहेर अनुभव बटुलीसकेकी छिन् भने जेनीथ एक्सपीरीयन्सेस ट्राभल सर्भिसेजको प्रबन्ध निर्देशक धाख्वा बिगत २० बर्ष देखि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध छिन । उनैसंगको निर्वाचन बिशेष कुराकानी
किन स्वतन्त्र समुहको रुपमा मैदानमा हुनुहुन्छ ?
हो अहिले हरेक संस्थामा राजनीति छ , तर हामी ब्यवसायी हौ राजनीति गर्ने हैन हामी ब्यवसाय गर्ने हो , कसैले त शुरु गरोस राजनैतिक रंग नदिएर पनि ब्यवसाय गर्न सकिन्छ , राम्रो काम गरेर राम्रो परिणाम दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरणको लागि हामी कुनै राजनीतिक दल प्रति आस्था नराखी अगाडि बढेको हो ।
यसपटक नाट्टाको चुनाव जित्छु भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सन २०१४ १६ को कार्यसमितिमा नाट्टाको महासचिव पदमा रहेर काम गरे र अहिले ४ बर्षको समय अवधीलाई हेर्दा ब्यवसायीक संस्था भएपनि ब्यवसायीक भुमिका खेल्न नसकेको देखिएको छ , आफ्नै सदस्यहरुसंग दुरी बढेको छ ,त्यसैले परिवर्तनका लागि एकता भनेर हामीले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेकाछौ आश छ यसपटकको नाट्टाको नेतृत्व मेरै हुनेछ सबैले साथ दिनुहुनेछ ।
अघिल्लो पटक पनि अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्थ्यो , तर सफल हुनुभएन ?
हो अघिल्लो पटक पनि म मैदानमा थिए , त्यसबेला तिनवटा टिम थियो मैले हारेकै हो , तर सन २०१४ १६ मा कार्यसमिति भित्र हुदा हामीले जसरी काम गरेका थियौ यो ४ बर्षको अवधिमा खासै केही सुधार भएको देखिएन । केही परिवर्तन गरौं, सदस्यको समस्या सम्बोधन गरौ भन्ने उदेश्यका साथ हामीले यसपटक गृहकार्य गरेका छौ आश छ सबैले साथ दिनुहुनेछ ।
तपाईको समुहमा ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् , धेरैले उम्मेदवार नपाएर भन्ने टिप्पणी गरेका छन् के हो ?
महिला भन्नेबित्तिकै अहिलेसम्मपनि हेप्ने चलननै छ र यसो भन्नुनै महिलालाई अपमान गरीएको हो , सबै जना महिला सक्षम छन् हाम्रो टिममा भएका सबै महिलाले कुनै न कुनै संस्थामा नेतृत्व गरीसकेका छन् । त्यसैले महिला पुरुषको कुरै छैन ।
मिहिका समुहको प्रतिबद्धता
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटक ल्याउनको लागि कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्ने ।
पर्यटन क्षेत्रको बृहत् विकास गर्दै गुणस्तरीयतालाई जोड दिने ।
पर्यटन क्षेत्रको उत्पादनलाई आर्थिक आधारको रूपमा विकास गर्दै लाने ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि जोड दिँदै तालिमको व्यवस्थाहरू गर्ने ।
पर्यटन क्षेत्रको रूपमा काठमाडौँ, चितवन र पोखरा मात्र सीमित नराखी सात वाटै प्रदेशमा बृहत् विकास र तालिम सञ्चालन गर्ने ।
नेपालमा निर्माणाधीन रहेको एयरपोर्टलाई चाँडो सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो तहबाट पहल गर्ने
सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने ।
पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि नाट्टामा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापन गर्ने ।
पर्यटकहरूको सही रूपमा तथ्याङ्क राखी पर्यटकहरूको प्रतिक्रिया लिने र त्यसमा आधारमा सुधार गर्ने ।
नाट्टाको सदस्यहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि निरन्तर छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने ।
पर्यटन क्षेत्रको समृद्धि र विकासको लागि निरन्तर रूपमा लागि रहने ।
महिला सशक्तिकारणमा जोड दिँदै महिलाले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि नाट्टाको दोस्रो महिला अध्यक्ष हुने ।
आधुनिक प्रविधियुक्त व्यवस्थित पर्यटकीय बसको व्यवस्था गर्नमा जोड दिने ।
पर्यटन बजारमा खस्कँदै गएको नाट्टाको साख जोगाउने
नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी बजारमा स्थापित गराउने ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षस् नारायण गुरुङ कोने
उपाध्यक्षस् रमेश थापा
महासचिवः कमला गुरुङ
सचिवः अमृत ढकाल
कोषाध्यक्षः देवकी गुरुङ,
सहकोषाध्यक्षः फूदोमा शेर्पा
सदस्यहरुः विजय राई, सुजिता गजमेर, विष्णु बस्नेत, सुवास महर्जन, सागर अधिकारी, भरतजंग पाण्डे र सृजना महर्जन ,राजकुमार देवकोटा ।
प्रस्तुती शारदा थापा
निकिता चान्डक र नायक बिराजको जिम र डान्स संगसंगै